မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ် မိုင်းလားဈေးကွက်နှင့် နီးစပ်သည့် တာချီလိတ်နှင့် ကျိုင်းတုံမြို့တို့တ? - Yangon Media Group
တာချီလိတ်၊ အောက်တိုဘာ ၁
မြန်မာ-တရုတ်နယ်စပ် မိုင်းလား ဈေးကွက်နှင့်နီးစပ်သည့် ရှမ်းပြည်နယ် (အရှေ့ပိုင်း) တာချီလိတ်မြို့နှင့် ကျိုင်းတုံမြို့တို့တွင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင်ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားမှုအခြေအနေမှာများ ပြားနေကြောင်း ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရန်ပုံငွေအ ဖွဲ့ (WWF) စီမံကိန်းမန်နေဂျာ ဒေါက်တာစံပယ်မင်းက ပြောသည်။
တာချီလိတ်မြို့တွင် လိပ်ကြက်တူရွေးအပြင် ဆင်အရေခွံ၊ ကျားသစ်နှင့် ကျားအရေခွံ၊ ဝက်ဝံလက် စသည့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားနေသည်ကို တွေ့ရှိနေရသည်။ ”ကျိုင်းတုံနဲ့ တာချီလိတ်က နယ်စပ်နဲ့ထိတွေ့နေတဲ့ မြို့တွေလည်း ဖြစ်တဲ့အပြင် တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရလိုမှု ကများနေတော့ မိုင်းလားဈေးကွက်နဲ့နီးတဲ့ တာချီလိတ်၊ ကျိုင်းတုံမှာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင် ရောင်းဝယ် ဖောက်ကားတဲ့အခြေ အနေတွေ တော်တော်များပြားနေတယ်။ ရှမ်းအရှေ့မှာ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေ ရောင်းဝယ်ဖောက် ကားမှုကို ဘယ်လိုတားဆီးကြမလဲ၊ ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ၊ ဘယ်လိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့ အဖြေရရှိဖို့အတွက် တာချီလိတ်၊ ကျိုင်းတုံကို ဦးစားပေးတဲ့အဆင့်အနေနဲ့ထားပြီး သင်တန်းတွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေ၊ အလုပ်ရုံဆွေး နွေးပွဲတွေ ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒေါက်တာစံပယ်မင်းက ပြော ကြားသည်။
တာချီလိတ်မြို့နှင့် ကျိုင်းတုံ မြို့တို့သည် တောတွင်းတိရစ္ဆာန် တရားမဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကား ခြင်းလုပ်ငန်းကို အများဆုံးလုပ် ဆောင်နေသည်ဟုဆိုသောကြောင့် အဆိုပါမြို့များ၌ သားငှက်တိရစ္ဆာန် တရားမဝင်ကုန်သွယ်မှုပပျောက် ရေး ပြည်သူလူထုအသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများကို ကျင်းပပေးနေ ခြင်းဖြစ်သည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၆ ရက်နှင့် ၂၈ ရက်တို့တွင် ကျိုင်းတုံနှင့် တာချီလိတ်မြို့တို့၌ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ထပ်မံကျင်းပရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
မြိတ်ကျွန်းစုထွက် ကဏန်းများကို တရုတ်ကုန်သည်များက ဈေးကောင်း ပေးဝယ်ယူနေမှုများကြောင့် ကဏန?
အမေရိကန် လယ်ယာထွက်ကုန်များ ဝယ်ယူခြင်းကို တရုတ်ရပ်ဆိုင်း